မီးဖို၌အိုး၌ Buckwheat - အသား, ကြက်သား, မှိုနှင့်ကြက်သားနှလုံးသားများနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ
မီးဖို၌အိုး၌ Buckwheat - ရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာများအတွက်အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
Buckwheat တစ်ဦးခေတ်မီပြီးရောင်စုံဖွဲ့စည်းမှုအတွက် banal နေ့စဉ်ဟင်းလျာများ၏မီးဖိုနှင့်အလှည့်အတွက်အိုး၌အထူးအရသာရရှိသည်။ pudding အခါတိုင်းပြီးပြည့်စုံပေါင်းစပ်အလျှော့ပေးလိုက်လျော, မည်သည့်အသား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, မှိုနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါပြင်ဆင်ပါ။
မီးဖို၌အိုး၌ buckwheat ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အိုး၌ Buckwheat ဂျုံယာဂုတစ်အချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံကိုမလိုဘဲရိုးရှင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှာတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခွင့်စာရွက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်များထားရှိခြင်းသည်အဘယ်သူကိုမျှရှိနိုင်ပါသည်။
displacement အရည်: ရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်အိုးရဲ့ contents လုံးဝသူတို့နှင့်အတူဖုံးလွှမ်းခဲ့ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရမည်။
1.5 နာရီမိနစ် 30 ကနေစာရွက်ပေါ် မူတည်. မီးဖို၌ buckwheat အိုးပြင်ဆင်နေသည်။
မီးဖို၌အိုး၌ buckwheat နှင့်အတူကြက်သား
ခေါင်းစဉ်ပေါ်သေးအရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးအရသာဖွဲ့စည်းမှု - ကြက်သားနှင့်အတူ buckwheat အိုး၌။ သူတို့ကိုသင် Pre-marinated, 20-30 မိနစ်ခန့်ကြက်သားဒါမှမဟုတ်အသေကောင်ကို၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးပါ, ပြီးတော့အဆုံးမှာထည့်သွင်းမုန်လာဥ, ကြက်သွန်နီ, ကြက်သွန်ဖြူ, အတူကြော်နိုင်ပါတယ်။4စားသုံးခြင်းဟင်းလျာများရရှိသောထုတ်ကုန်၏ဤပမာဏ၏။
buckwheat - 300 ဂရမ်;
မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီ - 1 pc; ။
ရေနံ - 40 ml ကို;
Laurel -2PCs; ။
ထောပတ် - 40 ဂရမ်,
ကြက်, ဆား, ငရုတ်ကောင်းအဘို့အ Seasoning ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများအတွက်ရာသီအတွက်ကုန်တယ်နှင့် Marine ကြက်သားရောင်နင်း။
3 မိနစ်အဘို့အကြော်, ကြက်သွန်နီနှင့်မုန္လာဥနီ Add, ကြက်သွန်ဖြူ add, buckwheat နှင့်5မိနစ်ခန့်အပူ။
အိုး၏အလောင်းတော်ထားအလေးချိန် Laurel ၏အသီးအသီးထက်ဝက်သို့လှဲချနေကြတယ်, တချို့ဆားထပ်ထည့်, ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုသွန်းလောင်းအဖုံး lids နှင့်မီးဖိုတဖို၌ 30 မိနစ်ခန့်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ချက်ပြုတ်၏မကုန်မီ 10 မိနစ်ရေနံအပိုင်းအစအဘို့အသီးအသီးအိုးတလုံးမှထည့်ပါ။
အထူးသဖြင့်အရသာရှိတဲ့ buckwheat အိုးကိုမီးဖိုတဖိုဝက်သားနှင့်အတူရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရေနှင့်ဟင်းရည်နှစ်မျိုးလုံးသုံးနိုငျ: အသားသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကပြုတ်ဖို့ Pre-အပူ။ ကြော်အသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏တောင်းဆိုချက်အရမှာ, သင်ပန်းကန်ကိုပိုပြီးမွှေးစေမည်ဖြစ်သောအချို့သောမှိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဝက်သား - 400 ဂရမ်;
မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီ - 1.5 pc; ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 40 ml ကို;
နံ့သာမျိုး, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်။
ဝက်သား Cube Cut, ရေနံအတွက်ကြော်နေကြသည်။
, ကြက်သွန်နီနဲ့မုန်လာဥ Add ဖြတ်သွားအသား, အိုးတလုံးပေါ်ထွက်ထားကြ၏။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3tbsp ၏တစ်ဦးချင်းစီမှထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ½ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့နှင့် Laurel ကပြင်ဆင်ဇွန်း buckwheat ။
တစ်ဦးအဖုံးများနှင့် receptacles နှင့်ဖုံးလွှမ်းအားလုံးပူအနံ့ဟင်းရည်, လောင်း 150 ဒီဂရီတစ်ဦး preheated မီးဖို၌ချထားပါသည်။
1.5 ပြီးနောက်အိုး၌ဝက်သားနှင့်အတူ languor buckwheat အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အိုး၌ buckwheat နှင့်အတူအမဲသား
အရသာနှင့်မီးဖို၌အိုး၌အမဲသားနှင့်အတူအံ့ဩဘွယ်သောအကြွယ်ဝသောအရသာ buckwheat မဆိုအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်၏အရသာကိုဘူးသီး amuse သည် finicky စားချင်သောသူ၏ပ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေနပ်အောင်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အိုးရဲ့ contents ရေအေးသို့မဟုတ်ဟင်းရည်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အစပိုင်းတွင်တစ်ဦးချမ်းအေးမီးဖိုတဖို၌ထားလေ၏။
အမဲသား - 600 ဂရမ်;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေနံနှင့်ထောပတ် - 40 ဂရမ်,
ကြက်သွန်နီနှင့်မုန္လာဥနီကိုခွဲ, chives, Laurel, နံ့သာမျိုး, buckwheat ထည့်ပါ။
, ထိုဟင်းရည်ရဲ့ contents လောင်းအဖုံးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်နှင့်မီးဖို၏ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ထားတော်မူ၏။
180 ဒီဂရီအားဖြင့် configure လုပ်ပြီးစက်ကိုတို့ပါဝင်သည်။
1.5 နာရီကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်ဦးမီးဖိုတဖို၌အမဲသားနှင့်အတူ buckwheat အိုးကိုဆီအနံ့နှင့်အခြား 10 မိနစ်အားလြော့။
အိုးတလုံးထဲမှာမှိုနှင့်အတူ Buckwheat - သက်သတ်လွတ်စားဘို့, အစာရှောင်ခြင်းငှာစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ပျင်းစရာသာမန် menu ကိုမျိုးစုံလိုသောသူများအတွက်အမှန်တကယ် godsend ။ အဆိုပါဆေးညွှန်းမထိုက်မတန်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အမြဲရရှိနိုင်မှို, ကမာမှိုနှင့်ရိုင်းမှိုတစ်ပန်းကန်တွန်းလှန်အရသာနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောအမွှေးပါစေ။
မှို - 500 g နဲ့;
မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီ -2PCs; ။
အရည်ကျိုထောပတ် - 50 ဂရမ်,
နံ့သာမျိုး, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ရေသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်။
ဝါရင့်အလေးချိန် buckwheat ဆက်ပြောသည်သည်ဟင်းရည်သို့မဟုတ်ရေသွန်းလောင်းလေ၏။
မီးဖို၌အိုးထားပါ, 200 ဒီဂရီဖမ်းယူနားဆင်သော။
40 မိနစ်ပြီးနောက် မှိုနှင့်အတူ buckwheat မီးဖို၌အိုး၌အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အိုး Buckwheat tradesmen - စာရွက်
Buckwheat tradesmen မဆိုအသားနှင့်မှိုပြင်ဆင်နေအိုး။ မကြာခဏမုန့်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်းတန်ဆာထဲမှာအရည်များအပြင်မတိုင်မီရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်နှင့်အတူက diluting, ဖြည့်စွတ်။ သင်အရေခွံကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့, ကုန်တယ်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်းနှင့်လတ်ဆတ်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီးကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါသင်ရမယ့်ပန်းကန်၏ချမ်းသာအရသာ။
ကြက်သားသို့မဟုတ်ဝက်သား - 300 ဂရမ်;
ရေနံ - 40 ဂရမ်,
မုန့် - 200 ဂရမ်;
ရာသီ, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်။
အဆိုပါကြက်သွန်ဖြူ, Laurel, နံ့သာမျိုး, buckwheat ထည့်ပါ။
မုန့်ခွက်ကိုဟင်းချိုသို့မဟုတ်ရေအပေါ်ယံပိုင်းအရည် contents တွေကိုမှသွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်မှေးမှိန်။
မီးဖို၌အိုး၌ 190 ဒီဂရီတောငျ့ buckwheat မှာတစ်နာရီပြီးနောက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မမေ့နိုင်သောအရသာနှင့်အလွန်မွှေးထုတ်လုပ်အိုး buckwheat အတူဘတ်ဂျက်နှင့်နှလုံးသားများ၏ရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ကြားမှ။ အထူးကျက်သရေအသားနှင့်ဒိန်ခဲ, ချဉ်မုန့်ပေးသည်, တစ်ဦးအဖုံးအောက်မှာဖုတ်ရှေ့တော်၌ထိုအိုးများရဲ့ contents ရာ၏မျက်နှာပြင်ဖြန်း။ 1.5 နာရီကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလေးအဘို့အဆင်သင့်မုန့်ညက်။
buckwheat - 250 ဂရမ်;
နှလုံးသားများ - 500 ဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူ -3လေးညှင်းပွင့;
မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီနှင့်အတူလိုက်သည်ကိုနှလုံးသားများကြော်, ကြက်သွန်ဖြူ add ထနွေး, အိုးများပေါ်ထွက်ထားကြ၏။
ဒိန်ခဲနှင့်အတူဖြန်း Added buckwheat, အချဉ်မုန့်, ရာသီ, ရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်ကိုလောင်း။
190 ဒီဂရီမှာ 35 မိနစ် Tomyat ပန်းကန်။
တောင်မှပိုမိုလွယ်ကူဝက်အူချောင်းနှင့်အတူအိုး buckwheat ပြင်ဆင်ကြရသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သာအကြော်ကြက်သွန်နှင့်မုန္လာဥနီ, ရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းများညျကြိ, အိုးတလုံးထဲမှာထည့်ထားကြသည်ရေနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အဖုံးအောက်မှာမီးဖိုမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အစားအသောက်၏အရသာကို၏မေတ္တာရပ်ခံချက်အချဉ်မုန့်, ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်, ခရမ်းချဉ်သီးသို့မဟုတ်ဒိန်ခဲကိုထည့်သွင်း, အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
ဝက်အူချောင်း - 400 ဂရမ်;
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, နံ့သာမျိုး။
အဆိုပါအိုးဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အလိုက်သည်ကိုဝက်အူချောင်းစက်ဝိုင်း၏ saute ထို့နောက် buckwheat အိပ်လေ၏။
ဝါရင့် contents တွေကိုရေသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်မီးဖို၌ထားတော်မူ၏။
မိနစ် 30 ပြီးနောက် 200 ဒီဂရီတောငျ့ပန်းကန်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်အသားနှင့်အတူအလှဆင်သည့်ပန်းကန်ထဲကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အိုးကင် buckwheat ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဖွဲ့စည်းမှုမှိုများကဖြည့်ဆည်းသည်နှင့်ဟင်းရည်အတွက် savory အမဲသားကိုအထူးသဖြင့်ပြည့်နှင့်ထူးခြားသောသို့မဟုတ်ဆုံးသောအရသာပေးသောအချဉ်မုန့်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်, ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။2နာရီပြီးနောက်, ဘောဇဉ်4ပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အသား - 400 ဂရမ်;
မှို - 200 ဂရမ်;
မုန့် - 150 ဂရမ်;
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် - 150 ဂရမ်;
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ရေ, နှင့်ဒိန်ခဲ။
ကြက်သွန်ဖြူ, ရာသီ, buckwheat, ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အချဉ်မုန့် Add, ရေသွန်းလောင်းလေ၏။
အိုး၌အသားနှင့်အတူတော buckwheat 1.5 နာရီကြာပြီးနောက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူ Buckwheat အိုး၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သီးခြားပန်းကန်, ဒါမှမဟုတ်အသားနှင့်ငါးတစ်ဦးအဖြည့်အပါအအာဟာရဖွဲ့စည်းမှုအဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု၏မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားထိုးသို့မဟုတ်သစ်တွေဖြည့်စွက်, သင့်ဦးစားပေး, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်များရရှိနိုင်မှုအရသိရသည်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ တစ်နာရီအကြာမှာလေးအဘို့အဆင်သင့်မုန့်ညက်။
ပဲစေ့တွေဟာ - 150 ဂရမ်;
ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း, မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီ - 1 pc ။
ထောပတ် - 60 ဂရမ်,
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ရေ, အစိမ်းရောင်။
အဆိုပါဆေးကြော buckwheat နှင့်အတူအန်စာတုံးနှင့်ရောထွေးဟင်းသီးဟင်းရွက်, နံ့သာမျိုးကိုပြင်ဆင်ပါ။
180 ဒီဂရီမှာမီးဖို 45 မိနစ် Tomyat pudding ။
တစ်ဦး pancake ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နို့နှင့်အတူ pancakes ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦး chalet-စတိုင်တှငျနထေိုငျ - တစ်ပျူငှါနွေးထွေးသောလေထုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များ
Gwen Stefanie နှင့် Gavin Rossdale ကြီးသောကွာရှင်းပြီးနောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး
တတာအတွက် ase ကြော်
အညိုရောင်သားရေဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အဖြူရောင်ဆွယ်တာအင်္ကျီ - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့စတိုင်လေးဖန်တီးနည်း
Duck ရင်သားကင်ဆာ - စာရွက်